Ayyaanni Irreechaa bara 2017 suuraan yoo ibsamu - BBC News Afaan Oromoo
Ayyaanni Irreechaa ayyaana Oromoon kaabaa-kibbaa, Bahaa-lixaa wal gahuun ayyaaneffatu dha. Waltajjii Oromoonni itti wal argan qofa osoo hin taane, bakka uffannaa fi faayaan aadaa ummatichaa itti mul'atus. Suuraawwan muraasa Irreechaa bara kanaa irraa argannee akkasiin isiniif dhiyeessineerra.
Oromoon aadaa fi seera ittiin bulu qaba. Aadaa uummatichaa keessatti bakki jaarsooliifi abbootiin gadaa qaban isa olaanaa dha. Kanaaf eegaa Abbootii Gadaatiin hogganamuun, foollee filatamaniin qajeelfamuun irreenfannaan baranaa akkasiin kan eegaleef.
Wayita gara irreeffannaa deeman, haadholiin siiqqee, dubartootni fi shamarran abbootii gadaa fi jaarsolii dura deemu.
Roobni ganamaa kaasee roobaa ture, hirmaattota ayyaanichaa hin danqine, shamarran kun lamaan dibaabee isaanii qabatanii dhaqan.
Dargaggoota uffannaa aadaa, bokkuu fi kallachaan miidhaguun akkasiin gara irreeffanaa deemaa turan.
Shamarran kunneen uffata aadaa Oromoo Harargeen bareeduun, aadaan teenya ammalleen dagaagaa jirtii jedhu fakkaatu.
Dargaggoo Oromoo gareedhaan uffannaa aadaa fi barneexaaa qopheefataniin miidhagaanii maree hoo jechaa gara horaatti qajeelaa turan keessaa muraasa.
Daraaraan keelloo fi margi jiidhaan yookin irreessi waaqa roobee marga biqilcheef akka kennaatti kan kennamu dha.
Lafa itti ireeffatamuttis, kuun suuraa yaadannoo kaafachaa, kuun marga jiidhaan irreeffachaa, warra irreeffachuuf dabaree eegatuuf bakka gadi dhiisuuf wal jalaa siqaa, irreefannaan baranaa akkasiin raawwate.
Shamarran Oromoo Karrayyuus kunoo akkasiin nutis guddina aadaa keenyaatiif dhaabannee jira jedhan.
Oromoon Kamisee aadaa fi dudhaa isaanii eeggachuun uummata jiraataa jirani dha. Fageenya dheeraa qaxxaamuruunis Irreecha baranaa irratti argamanii jiru.
Hirmaattonni ayyaana irreechaa bara kanaa ayyaanichi gammachiisaa ture jedhu. Seeqi fuula shamarran kanaa irra jirus kanuma ibsa.
Kunis aadaa uffannaa Oromoo Shawaa keessaa tokko. Uffannaan aadaa kunis tibba sirna kabaja ayyaana guddaa akka irreechaa fi tibba nama goota ta'eef gootummaan isaa himamuuf kan uffatamuudha.